गाडी एक्सचेन्ज र स्किमका... :: प्रकाश ढुंगाना :: Setopati
गाडी एक्सचेन्ज र स्किमका लागि टाटा ‘जनवरी फेस्ट’ - अर्जुन कार्की
छ हजार दुई सय स्क्वायर फूटमा फैलिएको टाटाको थापाथली सोरुम ‘जनवरी फेस्ट’ मेला चलिरहेको छ। शुक्रबारदेखि सुरु भएको मेला आइतबारसम्म चल्नेछ। मेला र टाटा मोर्टसको सम्वन्धमा नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ (प्यासेन्जर भेइकल बिजनेस युनिट)का असिस्टेन्ट जनरल म्यानेजर अर्जुन कार्कीसँग सेतोपाटीका सुधिर भण्डारीले गरेका कुराकानीः
२०१७ मा नेपालमा टाटाको व्यापार कस्तो रह्यो ?
बैंकमा तरलता अभावका कारण २०१६ को अन्तिममा समग्र अटो जगत नै अप्ठ्यारोमा परेको थियो। २०१७ मा आइपुग्दा बैंकहरुले पनि केही लचकता देखाए र ब्याजदर पनि घटाए। बैंकले अटो लोनमा कडाई गर्दा पर्खेर बस्ने ग्राहकलाई पनि २०१७ मा गाडी बेच्न पायौँ। सेल्सको हिसावले हेर्दा २०१७ निकै राम्रो रह्यो।
वर्षको सुरुवातमै ‘जनवरी फेस्ट’ नामक इभेन्ट आयोजना गर्नुभयो, यसको लक्ष्य के हो?
२०१८ मा सबै भन्दा पहिले इभेन्ट गर्ने सम्भवत हामी नै हौँ। नयाँ बर्षमा छुट्टै खालको तरङ्ग हुन्छ। नयाँ बर्षको तरङ्ग सँगसँगै केही कृयाकलापमा केन्द्रित हौँ भन्नको लागि हो। त्यस्तै हामीले नयाँ शोरुम खोलिसकेपछि यहाँ खासै केही गर्न पाएका थिएनौँ।
हाम्रा पुराना सबै ग्राहकलाई यहाँ बोलाएका छौँ। यो इभेन्ट पुरानाका लागि मात्र नभई अरु ब्राण्डको गाडीको बारेमा सोचिरहेका ग्राहकको लागि प्रचार प्रसार होस् भन्ने उद्देश्य पनि हो। त्यस्तै हाम्रो पुरानै ग्राहकहरु जो एक्सचेन्ज गर्न भनेर पर्खिरहनु भएको छ, स्किम पुगेन भनेर बसिरहनु भएको छ, उहाँहरुका लागि पनि हो।
अर्कोतर्फ ग्राहकको गुनासो सुन्न, नयाँ वर्षको शुभकामना आदान प्रदान गर्न र हामी टाटाको माध्यमबाटै एउटै परिवार हो भन्ने भावना जगाउनु यो इभेन्टको मुख्य उद्देश्य हो।
इभेन्टको लागि आफ्नै शोरुम रोज्नुको कारण ?
शोरुम देखाउनको लागि मात्र हामीले यहाँ इभेन्ट गरेका होइनाैँ। थापाथलीको टाटाको शोरुम नेपालकै सबैभन्दा ठुलो शोरुम हो। यति ठूलो र राम्रो शोरुम छ, राम्रो स्पेस छ, धेरै पार्किङ एरिया छ, यही शोरुममै पर्याप्त सुविधा भएकाले होटल, रिसोर्टको सट्टा यही किन नगर्ने भन्ने सोच हो।
इभेन्टका आकर्षक पक्षहरु के–के छन् ?
यो इभेन्टमा गाडी सेल्स, एक्सचेन्ज बोनस १ लाख र विशेष मोडलका गाडीमा ४ लाखसम्म दिएका छौँ। बीमा, अन द स्पट फाइनान्स, लेटेस्ट गाडीको टेस्ट ड्राइभ, टेष्ट ड्राइभ गर्नेलाई उपहार दिने लगायतका आकर्षक पक्षहरु छन्।
त्यो बाहेक हामीलाई भेट्न, शोरुम भिजिट गर्न, शुभकामना दिन आउनु हुने सम्पुर्णको मनोरञ्जनको लागि निशुल्क फुड कोट, विभिन्न उपहार, जादु प्रदर्शनी, नृत्य प्रदर्शनी लगायतका अन्य धेरै कार्यक्रमहरु छन्।
त्यस्तै सुरुको दिन सत्रु फिल्म युनिट, शनिबार कृ को युनिट, आइतबार प्रियंका कार्की लगायत कलाकारहरुले मनोरञ्जन गराउनेछन्।
कति जनाले इभेन्टको अवलोकन गर्ने आँकलन गर्नु भएको छ?
हामीले २ सय जना ग्राहक मात्र टार्गेट गरेका छौँ। किन भने यो इभेन्ट नाडा अटो शो वा कार मेला होइन। एउटा त हामी क्लोज ग्रुपलाई मात्र कल गर्दै छाैँ, त्यसकारण यो तीन दिनमा २०० जना ग्राहक ल्याउने प्रयास गरेका हौँ।
ग्राहकलाई भन्नु केही छ ?
यो तीन दिनको कार्यक्रममा हामीले ग्राहकलाई अन्य सामान्य दिनका धेरै सेवा र जानकारी दिन सकिन्छ।
जस्तै पुरानो गाडी हुनेहरुको लागि राम्रो भ्यालुएसन कसरी दिन सकिन्छ, टेस्ट ड्राइभमा के दिन सकिन्छ, सकेसम्म ग्राहकलाई बेस्ट प्याकेज दिन्छौँ, यो इभेन्ट गाडी बेच्नको लागि मात्र नभई ग्राहकसँग केही असन्तुष्टी भए त्यो हटाउन र टाटा र ग्राहकको सम्बन्ध अझ बलियो बनाउनको लागि हो।
प्रकाशित मिति: शनिबार, पुस २२, २०७४, ०८:५४:१३